A-Line Plaid ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်သမီးများမင်းသမီးဂါ ၀ န်
Kid Size ကို 876 12M 3T 2T54T 18M
အရောင် ပန်းရောင် အဖြူ အဖြူ 2
8 / ပန်းရောင်7/ အဖြူ6/ အဖြူ 12 မီတာ / အဖြူ 8 / အဖြူ 3T / White 2T / White5/ အဖြူ 4T / White 2T / ပန်းရောင် 3T / ပန်းရောင် 18M / ပန်းရောင် 18 မီတာ / အဖြူ 12M / ပန်းရောင် 4T / အဖြူ25 / အဖြူ22T / အဖြူ23T / အဖြူ28 / အဖြူ212M / white26 / အဖြူ27 / အဖြူ24T / ပန်းရောင် 18M / white26 / ပန်းရောင်5/ ပန်းရောင်7/ ပန်းရောင်
A-Line Plaid Sleeveless Girls Princess Dress - 8 / Pink backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: Plaid နှင့်လဲမှို့ရောစပ်
အမျိုးအစားအမျိုးအစား: Girls plaid စားဆင်ယင်, ကလေးတွေစားဆင်ယင်ပုတီးစေ့
ပုံနှင့်တူသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအ ၀ တ်အစားကို ၀ တ်ဆင်ပါ
အံ့သြစရာ လှသောအဆင်း! ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေး! အမြန်ပေးပို့! ဓာတ်ပုံလိုအတိအကျအတူတူပါပဲ .. ငါကြိုက်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စတိုးဆိုင်!
Платьесупер !!!!!! Берите !!!! Подошкахорошо, размерподошёлхорошо။ Ноонокороткое။ Еслиребёнокпухленькийтобратьнаразмербольше !!! Нигдененатирает။ ввосторге
Оооченьклассноеплатье! фото !!!
အဝတ်အစားကြီး ငါသူ့ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ကြည့်နေခဲ့ ငါရတဲ့အတွက်အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ကြည့်ရတာတော်တော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ အရည်အသွေးကအဓိကအရာဖြစ်တယ်။